Zilungele ukudibanisa iiVenzi zesiFrentshi
Ukudibanisa izenzi zesiFrentshi kwincwadi yokusebenzela okanye itekisi yinto enye, kodwa ukukhumbula isenzo somntu ngamnye xa uthetha ungomnye umcimbi. Nazi ezinye izicwangciso zokukunceda ukuba ube ngcono xa udibanisa izenzi zesiFrentshi .
Ngaphambi kokuba uqalise ukukhathazeka ngokuthetha isiFrentshi ngeentsenzi ezichanekileyo, kufuneka ufunde ukudibanisa. Kukho amakhulu wamakhasi kule ndawo angakunceda ufunde indlela yokudibanisa izenzi zesiFrentshi:
Ukuxubusha kwexesha elikhoyo - izifundo zokukunceda ufunde iipatheni zokudibanisa ngezizenzi eziqhelekileyo, izenzi zokucinga , izenzi ezitshintshayo, izenzi ezingenzi , kunye namaxesha
Izenzi eziyi-10 eziqhelekileyo zesiFrentshi - izifundo malunga nokuba, be, kunye nezivakalisi ezisixhenxe eziqhelekileyo zesiFrentshi
Isalathisi sexesha - ithala lezenzi zonke zesiFrentshi kunye neemeko, kunye nezikhonkwane kwizifundo zokuqhayisa
Emva kokuba ufunde ukudibanisa, kufuneka uyenze. Xa usebenza ngokwengeziwe, kuya kuba lula kuwe ukuba "uthathe" ukudibanisa okulungileyo ngexesha lokuxoxa ngokukhawuleza. Eminye yale mi sebenzi ingabonakala ibangelise okanye ingenangqiqo, kodwa ingongoma nje kukufumana ukubonwa, ukuva nokuthetha ukuxoxisana - nenye iimbono.
Xa ufumana izenzi ngelixa ufunda incwadi, iphephandaba okanye isiFrentshi isifundo , sithetha isihloko kunye nesenzi ngokuzwakalayo. Ukufunda ukudibana kuyinto enhle, kodwa ukuvakalisa ngokuzwakalayo kunokuba ngcono, kuba kukunikezela ukuthetha kunye nokuphulaphula ukudibanisa.
Sebenzisa imizuzu engama-10 ukuya kwe-15 ngemihla ngemihla yokudibanisa kunye nezitemu ezifanelekileyo zezifundo . Unokuzilolonga ukubhala okanye ukudibanisa amaxesha ahlukeneyo / imixholo yesenzi esisodwa, okanye yonke into, umzekelo, ukungqinelani kokungafezeki kwezenzi ezininzi. Emva kokuba ubhale phantsi, zithi ngokuzwakalayo.
Emva koko ubhale kwakhona, uthi kwakhona, uphinde uphinde uphindise ama-5 okanye amaxesha angama-10. Xa ukwenza oku, uza kubona ukudibanisa, uzive ukuba uthanda ukuthini, kwaye uvale, zonke ezo zikunceda ngexesha elizayo xa uthetha isiFrentshi.
Izigwebo kumntu wonke
Thatha iphephandaba okanye incwadi uze ukhangele isenzo sokubambisana. Yitsho ngokuzwakalayo, uze udibanise isenzi kubo bonke abanye abagrama. Ngoko ukuba ubona il est (ukhona), uya kubhala kwaye / okanye uthethe zonke iikhontrakthi zamanje zokuba zibe. Xa usuphelile, khangela enye isenzi kwaye wenze into efanayo.
Oku kufana nalokhu ngasentla, kodwa ngeli xesha udibanisa isenzi kwezinye iixesha ofuna ukuzenza. Ngokomzekelo, ukuba ubona umntu wesithathu ongowomnye ongowona ungowoku nje , uguqule ukuba ube nguye (uphelile compé), il was (engaphelelekanga), kwaye il sera (ikamva). Bhala kunye / okanye uthetha ezi ngqungquthela ezintsha , khangela enye isenzi.
Beka ezinye iingcamango kwi-tune elula, njenge "Twinkle Twinkle Little Star" okanye "Itsy Bitsy Spider," kwaye uyihlabelele eshahleni, kwimoto yakho endleleni eya emsebenzini / esikolweni, okanye xa uhlamba izitya.
Yenza isethi yamakhodi e- flashcards malunga nezenzi zineenkxalabo ezininzi ngokubhala isichazi sesifundo kunye nokungapheli kwelinye icala kunye nokulungiswa okuchanekileyo kwenye.
Emva koko uzivavanye ngokujonga kwinqanaba lokuqala uze uthi umxholo kunye nokuqhawula kwayo ngokuzwakalayo, okanye ngokujonga ukudibanisa kunye nokugqiba ukuba zeziphi izivakalisi (subject) zezifundo ezidibeneyo.
Enye indlela yokuziqhelanisa iinjongo zemisebenzi zesiFrentshi ezizodwa, njengalezi:
I-Verb Drills ka-R. de Roussy de Sales Qhathanisa amaxabiso
Incwadi yesiSebenzi sesiFrentshi nguJeffrey T. Chamberlain Ph.D noLara Finklea bachaze amanani
Ukuhlaziywa kwesiLwimi sesiFrentshi kunye nokuSebenza kukaDavid M. Stillman noRonni L. Gordon Qhathanisa ixabiso
Ukuphucula iFrench yakho
Ukuphucula ukuqonda kwakho kokuphulaphula kwesiFrentshi
Ukuphucula ukusetyenziswa kwakho kwesiFrentshi
Ukuphucula ukuqonda kwakho kwesiFrentshi
Ukuphucula ukusetyenziswa kwezenzi zesiFrentshi
Ukuphucula isigama sakho sesiFrentshi
Konke malunga neFrentshi rhoqo '-er' I-Verb 'Passer' ('ukudlula')
IziFomelo zeFransi kunye nezona ziPhakamileyo
Indlela yokuLawula ubukhulu ngokubhukuda
Ukubhala njani iinjongo ze-IEP zabaSebenzi beMpilo abaSebenzi bezempilo
Jonga i-Baleen Whale Umfanekiso
I-California State University-San Marcos Admissions
Ukuguqulwa kweMerika: Omkhulu Jikelele uBenedict Arnold
Amagama amatsha e-Element adluliselwe yi-IUPAC
Izinzuzo zokuhamba ngeGrafti
Isingeniso kwiMigaqo-siseko yoPhuculo
Ngubani owasungula i-Snowblower?